प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामको प्रश्न, ‘सरकार ढाल्न षड्यन्त्र गर्ने राजदूतलाई किन देश निकाला नगरेको ?’ – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
९ कार्तिक २०७७, आईतवार ०५:०२ English
प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामको प्रश्न, ‘सरकार ढाल्न षड्यन्त्र गर्ने राजदूतलाई किन देश निकाला नगरेको ?’
काठमाडौँ, १६ असार । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार ढाल्न षड्यन्त्र गर्ने राजदूतलाई किन देश निकाला नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । पार्टीले नागरिकता विधेयकको विरोधमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा. भट्टराईले सरकार ढाल्न चलखेल गर्ने राजदूतलाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्टिकरण सोध्न किन नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीजी कुनै देशको राजदूतले मलाई षड्यन्त्र गरिरहेको छ भन्नुहुन्छ । त्यसो हो भने उहाँ के हेरेर बस्नु भएको छ ? राजदूतलाई बोलाएर किन स्पष्टिकरण लिनु हुन्न ? राजदूतलाई तुरून्त देश निकाला किन गर्नु हुन्न ?’
नयाँ नक्सा जारी गरेपछि आफूलाई हटाउन भारतीय राज्य संयन्त्र लागेको र दूतावासको सक्रियताबाट त्यो प्रष्ट हुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
१६ असार २०७७, मंगलवार १५:५३ मा प्रकाशित